Kushomeka kwezvinhu zvinokanganisa iyo iPhone 13 uye iyo iPad | IPhone nhau
Kuperevedza kwechikamu kuchabata iPhone 13 nePadad
Luca Maesteri akabvunzwa nezve zvingangoita kushomeka kwekugovera kwechizvarwa chinotevera chePhones uye iPads kumusangano wemhedzisiro wezvemari wepagore. Maesteri, akatsanangura kuti Apple inoteerera kushomeka kwekupa uye izvo chakachengeteka chinhu ndechekuti inozopedzisira yakanganisa iyo iPhone uye kunyanya iyo iPad panguva yaGunyana anotevera.
Zvinogona kuti kushomeka kwakaonekwa mukati mekota yaJune kwakakura munaGunyana Maestri akataura. Izvi zvinoreva kuti izvo zvinorambidzwa zvinogona kukanganisa zvigadzirwa zvavo uye zvinotarisirwa kuti vachazviita nenzira huru muiyo iPad pane iyo iPhone 13.
Zvinotarisirwa naApple zvinofanirwa kugara zvichitarisirwa
Iko hakuna mumwezve ane chokwadi nezve zvinotarisirwa kupfuura iyo kambani pachayo Uye ndiko kuziva ruzivo nezve huwandu hwezvigadzirwa zvinogona kutengeswa kana kugadzirwa mukati mekota, Apple ndiyo inopa mhinduro. Zviripachena kuti Apple inoridza makadhi ayo uye haisi kuzoratidza kushaya simba, asi ichokwadi kuti chikamu chiri kutambura nekushomeka kwezvikamu nekuda kwezvikonzero zvakasiyana, kusanganisira chirwere cheCOVID-19 chinokanganisa nyika yese.
Chero zvazvingaitika, ngatitarisirei kuti iyo iPhone 13 haizotambura kunonoka sezvazvakaitika kuisa yazvino iPhone 12 mamodheru maererano nekugovera. Tim Cook pachake akatsanangura izvozvo vari kushanda nesimba kuti vadzivise matambudziko mune yekutsinhana cheni uye zvigadzirwa. Kune rimwe divi, zvimwe zvinhu zvinoshandisa silicon zvinogona kunge zvichitambura nezvirambidzo. Zvese izvi zviri pachena zvinokanganisa indasitiri yese uye Apple iri pachena kuti zvichave zvakaoma asi zvisingaite saka ivo vari kumanikidza michina kudzivirira matambudziko zvakanyanya sezvinobvira. Tichaona zvinoitika mushure memazororo ezhizha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 13 » Kuperevedza kwechikamu kuchabata iPhone 13 nePadad
Shandisa "Verenga zvirimo" kuti uve neiyo iPhone kuverenga skrini kwauri
DuckDuckGo inosuma chayo chishandiso kupfuudza email trackers